Proclaiming the Word - Vavaka avy any amin’ny Helo | Outlines of Messages
Vavaka avy any amin’ny Helo
Lioka 16, 19-31
1 Kointiana 16,15
Inona no atao hoe misiona ?
Ny misiona dia ny fanompoana amin’ny alàlan’ny fanoloran-tena tanteraka mba hahenoan’ny sasany ny Filazantsara !
Moa ve aho manana faniriana lalina ny hanaiky tanteraka an’Andriamanitra mba hanao izay azoko atao mba ho sahirana haka fanapahan-kevitra ho any amin’ny helo ireo olona mifanerasera amiko ?
Inona ny misiona –ko ? na hoe inona no tena hanirahana ahy ?
Moa ve aho nirahina tokoa ? Nekeko tanteraka ve izany andraikitra izany ?, izay nakinin’Andriamanitra tamiko ?
Nahoana no tokony havitrika amin’ny misiona ny kristiana ?
1. Fanontaniana roa lehibe.
Fanontanian’ilay lehilahy iray tao amin’ny Baiboly: “moa mpitandrina ny rahalahiko va aho ? (Genesisy 4, 9)
I Kaina io, izay niezaka nanamarina ny tenany.
Ny fanontaniana faharoa dia: “ Iza ary no namako ?” (Lioka 10, 29).
Tsy nahafantatra ilay mpahay lalàna hoe iza no namany.
Ny kristiana tsirairay dia mila manontany izany fanontaniana izany, nefa koa mila mamaly izany indrindra !
2. Fitsangantsaganana tany amin’ny helo – Lioka 16, 19-31.
Ny helo dia feno olona izay tena mitady misionera mafy dia mafy. Io dia toerana izay iangonan’ny olona izay nandà an’Andriamanitra ary tsy maintsy hiatrika ny mandrakizainy tsy misy an’Andriamanitra. Fantany tokoa ny mikasika ny zava-panahy, nefa tsy manana an’Andriamanitra izy ireo.
Maro ny kristiana no mamaky ny Baiboly sy mivavaka hoe “ Inty aho iraho aho” nefa tsy mbola manao na inona na inona ny amin’ny misiona sy afa-po ny amin’ny fombafomba fotsiny. Tsy miraharaha ireo olona handeha any amin’ny helo. ?moa ve ny Antson’ilay Macedoniana ao amin’ny Asan’ny Apostoly tena ampiharina amin’izao tonjato faha 21 izao ?
3% ‘ny mpino maneran-tany no tena manolotena amin’ny asa misiona
Mandany vola be amin’ny sakafo ho an’ny saka sy ny alikany toy izay ho an’ny misiona
Moa ve mahagaga raha be dia be ny olona hankany amin’ny helo ?
Mbola maro be ireo olona amin’ny fiangonana evanjelika no tsy tena afaka mijoro vavolombelona manambara an’I Jesosy Kristy
Ny Baiboly no boky tena be mpamaky indrindra eran-tany , nefa ny kristiana dia tsy mahavaky toko telo akory mandritra ny herinandro.
Maror ny kristiana no faly fa handeha any an-danitra nefa manadino ireo handeha any amin’ny helo ry zareo. Mila ny vinan’ny helo koa ny kristiana. Ity vina ity dia hanampy antsika hiaraka hivavka, hifady hanina ary hanome ny fiainantsika hamonjena ireo very. Ny vina ho an’ny very dia manomboka ao antranon’ny mpino miaraka amin’ny poketrany sy ny kaontiny any amin’ny banky.
Rehefa tsy mandeha aho dia mandefa olona.
Ny tena ilaina dia ny vavaka. Mila manana toe-tsaina mivavaka izay efa tsy hita intsony eo anivon’ny fiangonana ankehitriny.
Moa ve ny misiona no tena fanamby manetsika antsika sa aleontsika miafina ao anatin’ny rindrin’ny fiangonana tsy ampy fahamatorana ?
5. Ny Zava-misy eo amin’izao tontolo izao.
Ny 66 amin’ny olona 100 dia tsy mbola naheno an’I Jesosy Kristy.
70 amin’ireo dia tsy fotsy.
57 dia Aziatika
21 dia Eropeana
70 tsy mahay mamaky teny
50 mandry fotsy
1 tsy afaka nanohy ny fianarany eny amin’ny oniversity
40 dia ankizy misokatra ho amin’ny Filazantsara
6 dia manana ny 50%n’ny harenan’izao tontolo izao.
3 dia tena akaiky ary handeha any amin’ny helo, na dia androany aza.
Ireo isa ireo dia tsy misy dikany raha tsy mihaino ny Fanahy Masina isika ! Te-hiasa amin’ny alalantsika Izy !
6. Ny planin’Andriamanitra ho an’ny Kristiana.
Mivavaha mafy ary raharahio ny mision
Mila mametraka ireto fanontaniana ireto isika:
Mba hanao ahoana re ny fiangonana raha ny mambra tsirairay avy no tena havitrika tahaka ahy e!
Hanao ahoana re ny fiangonana raha ny mambra rehetra no manome maro tahaka ahy e!
Hanao ahoana re ny fiangonana raha ny mambra rehetra no tena mivavaka tahaka ahy e!
Mbola afaka manao mihoatra ve aho ?
Mbola afaka manome mihoatra ihany ve aho ?
Mbola afaka mivavaka mihoatra ve aho ?
Eritrereto ireo izay hihaona aminao any an-danitra; ireo izay nitorianao an’ny Tompo Jesosy, ary natolotrao Azy.
Raha tsy ianao dia iza ?
Raha tsy eto dia aiza ?
Raha tsy anio dia rahoviana ?